iPhone 6s / macruufka 9
1.7 iPhone 7 ama iPhone 6s (Plus)?
iPhone 6s (Plus) Images: Tani waxa 6s iPhone (Plus) u eekaan kartaa?
Iyadoo 6s ka iPhone (Plus) 's bandhigista soo at 9-kii September 2015, wax badan oo ka mid ah doodda loo qaaday meel waxa 6s iPhone (Plus) dhab ahaan u ekaan doonto. Ka war xaqiiqda ah in tufaaxa badala design ee ay state of iPhone tahay 3 sano oo kasta, iPhone 6s (Plus) / 6s / 6s lagu daray ama wax alla wixii dadka waawayn waxaa loo yeeri lahaa in ay noqdaan, mid noqon lahaa fiican oo ku saabsan xaqiiqada ah in ay jiraan ma noqon doonto wixii isbeddel weyn oo design iyo halkii ay noqon doonto in ka badan oo hagaajinta la kordhiyo oo iPhone jira 6.
iPhone 6s (Plus) - bezel fikradda ka yar.
Ma noqon doontaa lama filaan ah ayay inoo tahay haddii tufaax go'aansado inuu caato ah hoos iPhone isagoo isku dayaya in ay riixaan xuduudaha hal-abuurnimo. Mid ka mid ah isku day sida ku lug 6s iPhone (Plus) bezel isagoo yar.
Bezels ayaa ka mas'uul ah in ay qabtaan screen telefoonada bandhigay oo ku jira meesha. Haddii in uu saaro iyo telefoonka waa phone dhan-screen ah, waxaa jira fursad u noqon lahaa ka badan oo xasaasi ah oo ka hawl yar in ay jebiyaan, kuwaas oo mid ka mid ahaa dadka isticmaala ay doonayaan ilaa iyo haddii mid ka mid ah ma doonayo in ay telefoonka inuu noqdo qaab wanaagsan.
Waa maxay dadku waxay yiraahdaan
"Waannu helnay xiriir ka dhaxeeya qalabka la bezels khafiif ah - ay dhan tahay mid aad u daciif ah."
"Sidee telefoonka caato la filayaa in ay noqon dadyowga oo ah telefoon ugu jeceshahay? Anigu waxaan ahay caato ah, iyo dadka oo aan i jeclayn. "
"Waxaan qabaa in qaab bezel-free waa u xun oo Waxaan sidoo kale qabaa in Apple marnaba fikraddan la qaato lahaa ... iyo saabsan galaas in gooladaha hoos dhinacyada, in fikrad aad u xun oo aad u Apple iyo sidoo kale marna ma samayn lahaa in ..." - Jeffery
Comments laga helay ilo qarsoodi ah oo ku saabsan internetka.
iPhone 6s (Plus) - Taxanaha 7000 Aluminium daawaha.
Images of waxa sheegtay inuu yahay 6s iPhone ayaa si qarsoon loo 9to5Mac horraantii July , taas oo muujinaysa aragtida gudaha iyo dibadda ee sanduuqa battariga ee biraha lacag ah, taasoo u muuqataa mid aad u la mid ah aluminium anodised loo isticmaalo iPhone 6. Si kastaba ha ahaatee, xaqiiqadu waxa ay noqon karaan Taxanaha 7000 daawaha aluminium loo isticmaalo Watch Apple Sport - kooban ah xoojiyey cusub oo absorbance lama filaan fiican iyo cimri dherer ah ee dukaamada waaweyn.
"Waxaan rajeynayaa waxan ma waxay xoodaan sida ururka ka horeeyey yeeleen ii" -Danish Irfan.
"Maxaa ku xiga? Body laga sameeyo fiber carbon? "
iPhone 6s (Plus) - Size Screen.
Apple ee dhaqanka usabilty daranyihiin hal waa waxa iPhone ku salaysan yihiin. Waxba fiicnaan laheyd in la dareemo badan telefoonka oo keliya raaxo leh oo si fiican u qabsadey ee timirta ahaa oo Yaadan gacantayada ku xukuma.
6s iPhone The (Plus) waxaa lagu xamanayaa in aad raacdo dimmensions la mid ah ee iPhone 6 iyo 6 daray la size screen ee 5.5 inches iyo 4.7 inches siday u kala horreeyaan.
"Maqalka La ku saabsan iPhone screen weyn tan iyo 2010. Wax ka dhacay ilaa iyo haatan.
Laakiin, sanadkan ... Waxaan rajaynaynaa kartaa isbedel! 70% fursad waxaa s ... "-FrankJL
iPhone 6s (Plus) - dhisay id taabashada ee shaashadda.
Sonovation ayaa shaaciyay Talaadadii in ay is gelin kara dareemayaal jismiyeed ultrasonic hoos bandhigay bakhtiyo Glass, iyo qalabka weli awoodi doonaan in ay akhriyaan faraha user ee. Tani waxay awood u lahaa button guriga ku xayiran iPhone ee loogu tan iyo bilowgii aad si la tirtiro oo halkan ka eegto cusub fikirka oo dhan.
"Midoobidu dhisay id xiriiri in screen laftiisa waa hal-abuurnimo fiican in scanner sawirka faraha ka jira button guriga oo ku guuldareysto barta qaar ka mid ah waqtiga" - Debabrata Ponda
iPhone 6s (Plus) - Ciidamada feature taabto.
The Taptic Engine iyo Force Touch ka MacBook cusub iyo Apple Watch ayaa lagu xamanayaa in la samaynaya muuqaalka ah on iPhone cusub, siinta dadka isticmaala habab cusub oo ka mid ah, lalana xiriiro ay dukaamada. Force Touch ogaadaa sida ay u adag user waa daran oo kuu ogolaanaya in falalka kala duwan in la sida ay fuliyeen. Riix badhanka soonka-weeraryahanka in ciyaaryahanka video ah, oo aad u kala duwanaan karaan xawaaraha ugu taas oo sababi adigoo riixaya fududee ama adag tahay, tusaale ahaan.
"In kor qaababka cusub waa wanaagsan yahay, laakiin waa in u qabtaan iyo sidoo kale si fiican oo sidoo kale loo taageero nolosha batari ah dukaamada waaweyn ee" - Sudhakar Reddy M.
iPhone 6s (Plus) - dabool Smart
Dunida waxa ka mid ah khiyaali ah had iyo jeer waa ka sii badan grand xaqiiqada. Naqshadeeye A magacaabay Vuk Nemanja Zoraja, ayaa soo bandhigay waxa uu jeclaan lahaa in mobiilka iPhone ama ay u eegaan sida mustaqbalka. Images Fikradda muujiyaan off ah 6s cajiib ah bezel-yar caato ah iPhone (Plus), kaas oo ka yimaadaa leh dabool smart xiiso leh si ay u ilaaliyaan bandhigay.
dadka isticmaala iPhone mar walba waqti adag ilaalinta screens phone ay ka xagashada iyo nasashada. Daboolka sare smart sahal waa in ka mid ah madax xanuun iyo in aynu dadka isticmaala iPhone-aragnimo dheeraad ah oo farxad la telefoonada ay ku raaxaystaan.
"Cover The smart waa lagama maarmaan u ah dhammaan dadka isticmaala iPhone. Waxaan jeclaan lahaa waxa uu helo u qoraalkii hore ee iPhone heli karo iyo sidoo kale! ' -Priyanka Chawdoury.
"Telefoonka waa in aysan ka miisaan badan ay sabab u dabool ama mid kale ma dareemi doonaa sida iPhone ah mar dambe" - Varun Sharma.
"Sidee ku saabsan caddaynta faraha? Taasi waa waxa aan doonayo. My Iphone 5 eg 3 sano jir qalabka oo dhan aawadood faraha ka. "-Sean Clark
iPhone 6s (Plus) - taaj Digital.
Sport ayaa soo socda iPhone taaj oo kale ah digital sida tufaaxa daawan doonaa? Ku dhawaad ​​hubaal ma. Sida u gaar ah sida fikradda waa, ma aha wax ku ool ah oo ku filan si loo soo dajiyo taaj oo kale ah digital. Aragtidayda digital ah ay u egtahay zit diyaar u ah inuu la tickled.
"Looma baahna taaj digital. Wixii ugu danbeeyay ee aynu wada doonayaan waa 5 inch weyn watch fadhiya meelo aynu si fiican u kharash badan 50K "-Jonathan
"Waxa dhici doonaa muuqaal u eg ka telefoonka. Diiday! "- Shakhsinimo Gupta
"Waxaan hadda isticmaalay iPhone ah noloshayda oo dhan oo Waxaan gebi ahaan fikradda this. Caabin ah" -Ellie Ebrahim.
iPhone 6s (Plus) - cado dahab Rose.
Waxa intaa dheer in midabka jira ee iPhone 6 kuwaas oo ka mid ah Gold, Silver, Space Grey iyo caddaan, 6s iPhone (Plus) waxaa lagu xamanayaa in ay ka soo baxaan kala duwan oo cusub oo ka mid ah midabka, kuwaas oo ah "daran dahab Rose". Midabka Tani racfaan lahaa dumarkii oo dhan waxaa wax raba sida tallaabadaas inay soo xirtaan dharka.
"Jeclaada boorish cusub ee midabada!" - Ankita Thakral
"Maanka ku jirteen jazzing kor u lebbisan oo kaliya in ay isu barbar qof ee telefoonka." - Sumanna Sree.
"Waxaan jeclaan lahaa iPhone waxay bixisaa noocyo kala duwan oo dheeraad ah oo doorashooyin la eego isku midab ah ama keeni wax la mid ah kii sameeyey Moto ah." - Swasti Sharma.
Poll: Waa kuwee ka mid noqon kara dhabta ah?
Iyada oo baadhitaan degdeg ah sameeyay dadka igu wareegsanaa, dadka codeeyay ka dhanka fikirka ah phone bezel lacag la'aan ah iyo in Nicmada ee ka dhisay bandhigay id taabto.
Cado dahab Rose ayaa ahaa dadka ugu jecel yahay oo la rumeeysan yahay in xaqiiqda ah in mustaqbalka dhow. Adiguna see tahay?
> Resource > iPhone > iPhone 7 Images: Ma waxa iPhone 7 eekaan kartaa?